Uthi sekusele kubagadli ukuthi benze owabo umsebenzi unozinti woSuthu - Impempe
Uthi sekusele kubagadli ukuthi benze owabo umsebenzi unozinti woSuthu
Uvele wathatha umthwalo wawubeka kubagadli unozinti waMaZulu FC, uVeli Mothwa ethi iqembu lenza kahle kodwa into esishoda wukuthi lishaye amagoli ukuze liqale ukuqoqa amaphuzu. Lo nozinti ubekhuluma ngemuva kokuthi Usuthu luhlulwe yinqwaba yamathuba okushaya amagoli lwaze lwagcina lubambana neSuperSport United kuba ngu 1-1 emdlalweni weDStv Premiership maphakathi neviki.
“Sidinga ukuba bukhali phambi kwamapali, kumele sishaye amagoli ukuze sithole amaphuzu,” usho kanje uMothwa. “Uma sidlala ngamathuba, igoli ligcina lingene ngakithi. Sidinga ukushaya amagoli amaningi ukuze siwine imidlalo bese sithola amaphuzu aphelele,” kuqhuba lo nozinti oneminyaka engu-29.
Uthe konke okunye kuhamba kahle eqenjini, inkinga nje sekuyikho ukuthi abawini. Ukubhacaza kwabanye babadlali boSuthu sekwenze umqeqeshi, uBenni McCarthy waphumela obala wathi khona okuzomele bashiye kuleli qembu ngoba babukeka bengazimisele ukusiza iqembu liye phambili. Kodwa uMothwa ubona luselukhulu olzokwenziwa yileli qembu.
“Ngiyakholelwa kakhulu kuleli qembu,” kusho uMothwa. “Siqinile ngokwengqondo nangokomzimba. Ngalo khilimu wabadlali esinawo lana, singancintisna nanoma yiliphi iqembu. Into okumele siyilungise nje ile yamagoli. Akukuningi okudinga ukulungiswa. Sinabadlali abasezingeni, onozinti abasezingeni nethimba labaqeqeshi elisezingeni. Sidlala kahle futhi sekushoda amagoli nje qha.”
UMothwa uzothemba ukuthi Usuthu luzoqala ukushaya amagoli uma selubhekene neBaroka FC emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo ngo 5 ntambama. Njengoba Usuthu lwehlulwa wukubhakuzisa inethi, iBakgakga yona ayinayo leyo nkinga, buka nje ngoba iqeda kubhuquzisa iStellenbosch FC ngo 3-0 emdlalweni waphakathi neviki.
Previous Previous post: Usekhumbule uLepasa noMabasa umqeqeshi wePirates ehlulwa ukushaya amagoli
Next Next post: ISharks ihlome ngamaBhokobhoko koweCarling Currie Cup